AQRISO: Qisada Gabadhii lagu kufsaday Galdogob iyo Sida ay wax u dhaceen “Hubaal waad ilmeyn” - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: January 17, 2017, 8:50 pm
Dad badan ayaa laga yaabaa ineysan xog badan ka heyn sida uu ku bilowday isla markaana uu ilaa haatan ku socdo kiiska la xariira gabar 16 jir ah oo ay kufsi wadareed ugeysteen 6 wiil oo qaan gaar ah.
Kufsigan oo uu wehliyay jirdil iyo tooreyn gabadha lagula kacay ayaa keenay iney naxdin iyo dhaawacyo soo gaaray darteed ilaa haatan isbitaal koomo kula jirto.
Hadaba, Waxaad qeybta danbe ka ogaan kartaan Wax walba oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato dhacdadaan murugada leh
(Dareen Damqasho hadii aad leedahay walaal u duceey Gabadha la dhibaateeyay)
6 wiil ayaa kufsaday, Midka ugu weyn waa 27 jir. Lixda mid kamid ah Suldaan ayaa dhalay, midkalana wuxuu la dhashay Ex-Xildhibaan Xoosh oo Barlamaanka Somaliya ka tirsanaa, marna wasiir noqday
Duco oo kaliya ayey kaaga baahan tahay ee u duceey Please in walaasheen caafimaad uu Alle siiyo, Allow caafi yaa allah.
DAAWO: Gabadhii lagu Fara xumeeyey Galdogob oo wareysi Xanuun badan bixisay, Kana hadashay sidii loo dhibaateeyey